Uvavanyo lweeMfuno eziZodwa zoMsebenzi
Iimvavanyo ezenzelwe ukuHlola abaKhuphe beZakhono zoBomi
Kubantwana abanokukhubaza kakhulu imimiselo, kufuneka babe nekhono labo lokusebenza ngaphambi kokujongana nezinye izakhono, ezifana nolwimi, ukufunda nokubhala kunye nezibalo. Ukuze ukwazi ukuqonda ezi zihloko, abafundi bafanele bakwazi ukuqala ngokuzimela bazikhathalele zabo izidingo: ukutya, ukugqoka, ukugcina indlu yangasese nokuhlamba okanye ukuzityhila (konke okubizwa ngokuba yinyameko.) Ezi zakhono zibaluleke kakhulu kwixesha elizayo lokuzimela kunye nomgangatho wobomi kuba bafundi abakhubazekileyo.
Ukuze unqume ukuba yiziphi izakhono kufuneka ziqwalaselwe, utitshala okhethekileyo kufuneka ahlole izakhono zabo.
Kukho iimvavanyo ezininzi zobomi kunye nezakhono zokusebenza. Omnye owaziwayo kakhulu yi-ABLLS (ebizwa ngokuba yi- A- bels) okanye Uvavanyo lweeLwimi eziSiseko kunye neZakhono zoFundo. Eyenziwe njengesixhobo sokuvavanya abafundi ngokukodwa kwi-Analysis Behavioral Analysis kunye nokuqeqeshwa okungaxilwanga, kuyisistim sokuqwalasela esingagqitywa ngudliwano-ndlebe, ukubonwa ngqo okanye ukujonga ngokuthe ngqo. Ungathenga ikiti kunye nezinto ezininzi ezifunekayo kwizinto ezithile, njengokuthi "ukubiza amagama amathathu kwi-4 kumakhadi eencwadi." Isixhobo esichitha ixesha, kukwafuneka ukuba kube nokunyusa, ngoko incwadi yokuhlola iyahamba nomntwana unyaka unyaka njengoko bezuza izakhono. Abanye ootitshala babantwana abanokukhubaza kakhulu imimiselo baza kuyila iiprogram, ngokukodwa kwiinkqubo zokungenelela kwangaphambili, ukujongana ngqo nokulahleka kovavanyo lwabo.
Olunye uvavanyo olwaziwayo kwaye oluhloniphekileyo luyi-Vineland Adaptive Behavior Scales, Edition Second. IVineland iyaxhatshazwa ngokubanzi kubantu abaninzi. Ubuthathaka kukuba luqukwa kohlolo lwabazali kunye nootitshala. Ezi zimbonakaliso ezingqalileyo, ezinokuthi zithathwe ngumgwebo othobelayo (umfana omncinci akanako ukwenza okubi.) Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa ulwimi, intsebenziswano kunye nentsebenziswano ekhaya kunye nokuhlakulela iontanga ezifanayo, i-Vineland inikela ngutitshala okhethekileyo ngombono zezidingo zentlalo, ezisebenzayo neziphambi kwezemfundo.
Ekugqibeleni umzali okanye umnakekeli "ingcali" kwiimpawu kunye nezidingo zomntwana.
I-Callier Asuza Scale yenzelwe ukuvavanya umsebenzi wabafundi abayizithulu, kodwa isisityebi esihle sokuvavanya umsebenzi wabantwana abanezifo ezininzi, okanye abantwana kwi-Spectrum Spectrum enomsebenzi ophantsi. I-G Scale iyona nto ibhetele kuloluhlu, kwaye kulula ukuyisebenzisa ngokusekelwe kwindlela yokufundwa komfundisi ngomsebenzi wengane. Isixhobo esinokukhawuleza ngaphezu kwe-ABBL okanye i-Vineland, sinikela ngokukhawuleza komsebenzi womntwana, kodwa asiboneleli ngcaciso echazayo okanye yokuxilonga. Sekunjalo, kumanqanaba okwangoku we-IEP, injongo yakho kukuchaza amakhono omfundi ukwenzela ukuba uhlole oko kufuneke ukuba kwenziwe kakuhle.
Isicwangciso soTitshala ukuPhakamisa ixesha lokuFunda kwabafundi
Ukuvavanya abafundi abaneemfuno ezizodwa
Uhlalutyo lomsebenzi: Isiseko sokuphumelela ngokufundisa izakhono zoBomi
I-TSS - Abasebenzi beNkxaso yoLondolozo lwaBasebenzi abaNcedisayo AbaFundisi ngabanye
Isikhokelo soMlawuli weSikolo kuVavanyo lootitshala abaphumelelayo
Ukubuyela kwiSibhakabhaka seSikolo, iiWebhsayithi zokuSebenza, kunye neZibonelelo
Imfundo Jikelele: Imfundo Yomntu Wonke Kufanele Inikelwe
Uvavanyo lweMfundo eZodwa
Ubunjani boLwazi oluLawula ukuFunda noVavanyo
Uhlobo: I-Tech Tech Teaching From the Skinnerian Behaviorism
Iikhompyutha ezingama-49 ezivela kwi-Teach Like a Champion
Ngaphandle kweNdwendwe yoLwazi lwezoBomi
Iintando zeNdlu zaseMelika
AD okanye AD Inkcazelo yeKhalenda
Ikholeji yaseColby-Sawyer - Inkcazo, iindleko kunye neData ye-Admissions
Imbali yenkcazelo yeWiccan "Ngoko iMote ibe"
20 I-Harry Potter I-Tumblr Posts Ephosakeleyo kangaka, Ziyamangalisa
Indlela Yokuphumelela Intliziyo Yomntu We-Scorpio
UThales waseMileto: iGeometer yesiGrike
Ukuguqulwa kweMelika: uMninimandla Jikelele uHenry "IHlazi eliKhanya uHarry" uLee
Umbala wePeriodic Table of Elements - I-Valence Charge
Iingxaki zeMathematika eziNenjongo Ukunceda ama-6-graders Sombulula iMibandela Yobomi
Isifundo seMbali yaseMerika: Ukuhlamba i-Kansas
IiMfazwe ezinkulu zeMfazwe yombutho
Khangela i midi kwi quatorze hours
Imibuzo yeRick Perry
Iifowuni zoLwazi lokuPhatha izinto zokuThatha
I-Saponification Definition and Reaction
Imigaqo yeGalofu - Umgaqo-32: I-Bogey, Par and Stableford Imincintiswano
Yintoni i-AAA yeVidiyo yeVidiyo?
'I-Ado eninzi malunga Nento' Iingcaphuno
U-Antonio Inoki wamelana no-Muhammad Ali